Madaxweyne Trump oo soo saaray amar cusub oo lagu mamnuucayo 6 dal oo muslimiin ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Trump oo soo saaray amar cusub oo lagu mamnuucayo 6 dal oo muslimiin ah
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa maanta oo Isniin ah saxiixay amar cusub oo lagu mamnuucayo 6 dal oo ka mid ah todobadii dal ee muslimiinta oo horey xayiraadooda ay laashay maxkamadda federaalka dalkaas.
Amarkaan cusub oo la mid ah midii hore ayaa waxay dhigeysaa in dalalka kala ah Soomaaliya, Yemen, Suuriya, Suudaan, Liibiya iyo Iiraan aysan gali karin dalka Mareykanka, iyadoo markaan laga reebay dalka Ciraaq oo diiwaankii hore ku jirtay.
Rex Tillerson oo ah xoghayaha arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in amarka cusub ee madaxweynaha loo dhaqan-gelin doonno si deganaan leh, isagoona sidoo kale xusay in madaxweyne Trump uu doonayo in dadka Mareykanka ay nabad iyo amni ku noolaadaan.
Dhinaca kale, amarkaan oo dib u eegis lagu sameeyay ayaa noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo markii midkii hore ay hor-istaagtay maxkamad federaal ah, wuxuuna amarkii hore ee Trump ku mamnuucay inay Mareykanka soo galaan dadka kasoo safraya todobo dal oo Muslimiin ah.
Amarkii hore ayaa ahaa mid dhaliyay jahwareer dhanka garoomada diyaaradaha Mareykanka ah, iyadoona xilligaasi dib loo celiyay dad sitay dal ku gal sax ah, kana soo jeeday 7-da dal ee laga mamnuucay inay soo galaan dalkaas.
Hadaba muxuu amarkii hore kaga duwan yahay amarkaan?
Amarkaan cusub ayaa la sheegayaa inuu ka duwan yahay kii hore, wuxuuna kan noqon doonnaa mid aan si dhaqsi ah ku dhaqan galin, wuxuuna si rasmi ah u dhaqan geli doonnaa laga bilaabo 16-ka bishaan March, iyadoona amarkaan uusan saameyn ku yeelan doonin dadka haysta sharciga deganaanshiyaha Mareykanka (Green Card), ee kasoo jeeda lixda dal ee la mamnuucay.
Lixda dal kale ee diiwaankii hore ku jiray ee Soomaaliya, Suuriya, Liibiya, Yemen, Suudaan iyo Iiraan ayaa markale la filayaa in lagu soo roggo xayiraad 90 maalmood ah.
Sidoo kale, dhamaan dadka qaxootiga ah ayaa laga mamnuuci doonaa 120 maalmood, balse Conway waxay muujisay in qaxootiga Suuriya oo dhan aan la hor istaagi doonin.
Dhinaca kale, waxaa suurto-gal ah inuu amarkaan cusub la kulmo caqabado dhanka sharciga iyo maxkamadaha ah, sida ay sheegeen sharci yaqaano Mareykan ah oo ku doodaya in dowladda aysan muujinin caddeynta sababta loo soo rogay amarkaan kale.